Milateriga Soomaaliya oo sheegay iney jebiyeen Alshabaab & Qoryooley oo la geeyey Boolis – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Taliyaha ciidamada xogga Soomaaliya, Jeneraal Daahir Aaden Cilmi (Indho-arsho) ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay howlgalladii ugu dambeeyay ee gobollada ay jab weyn ku gaarsiiyeen Shaabab.
Ciidamada dowladda oo garab ka helaya AMISOM ayaa dhowaan al-Shabaab ka qabsaday magaalooyin waaweyn iyo deegaanno ka tirsan gobollada koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya.
Indho-qarsho ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM howlgalka socda ku dileen kuna dhaawaceen tiro Alshabaab ah, qaar kalana qabteen, isla markaana magaalooyin muhiim ah ay ka qabsadeen.
Talyaha ayaa ballan-qaaday inay sii socon doonaan dagaallada ka dhanka ah al-Shaabab, ayna guulo hor leh rajeynayaan. Wuxuu shacabka ka codsaday inay howlgallada ciidamada taageeraan.
Jeneraalka ayaa dhanka kale ciidamada dowladda fedeeraalka iyo kuwa AMISOM ku ammaanay howlgallada ka dhanka ah al-Shabaab.
Alshabaab ayaan ku dagaallamin inta badan magaalooyinka laga saaray, marka laga reebo degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ka dhigan in khasaare badan uusan Alshabaab ku gaarain dagaallada lagu qaaday.
Dhinaca kale, ciidamo isugu jira Booliis iyo Nabad Sugid ayaa si rasmi ah uga howl bilaabay degmada Qoryooleey ee gobolka Shabeellada Hoose.
Sida wararku sheegayaan ciidamadan nabadsugida iyo booliska ayaa ka baxay magaalada Muqdisho, iyagoo ka qeyb qaadanaya howl galo iyo baaritaano laga sameynayo degmada Qoryooley.
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Booliska ayaa sheegay in mar walba oo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM la wareegaan deegaan, ay ciidamada booliska iyo nabadsugida ka howl galaan, si ammaanka loo sugo.
Wasaarada Arrimaha gudaha iyo Federaalka ayaa sheegtay in degmo kasta oo la qabto muddo 2 todobaad ah ay gacanta ku heynayaan milateriga Soomaaliya iyo AMISOM, kadibna loo soo magacaabayo Maamul KMG ah, lana howl gelinayo Boolis iyo Nabadsugid.
Mid ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Banaadir oo maanta xilka laga wareejinayo